Lisitry ny penicillins: Fampiasana, marika iraisana, ary fampahalalana momba ny fiarovana - Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina | Desambra 2021
Ny Fizahana Orinasa, The Checkout Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa, Vaovao Fialam-Boly Community, Company Pets Fanatanjahan-Tena Mavesatra Zava-Mahadomelina Vs. Namana Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa News Fiaraha-Monina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao
Tena >> Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina >> Lisitry ny penicillins: Fampiasana, marika iraisana, ary fampahalalana momba ny fiarovana
Lisitry ny penicillins: Fampiasana, marika iraisana, ary fampahalalana momba ny fiarovana
Penicillin dia hitan'i Alexander Fleming, mpitsabo mikrôbiôlôjia mikrobiôlôjia ary mpitsabo tamin'ny 1928. Nomena anarana io Bobongolo Penicillium rehefa tsikaritr'i Fleming fa naneho toetra mampiavaka ny bakteria ny bobongolo. Ny fahitana penicillin dia hanova ny tontolon'ny fanafody ho antibiotika maoderina voalohany. Ankehitriny, misy karazana penicillins maro karazana novokarina mba hitsaboana ny aretina mikraoba.
Vakio hatrany raha te hahalala bebe kokoa momba ny kilasy antibiotika penicillins, ny fampiasana azy ireo, ary ny vokadratsin'izany.
Lisitry ny penicillins
Anaran'ny marika (anarana mahazatra) Vidiny vola antonony Vidin'ny SingleCare Hamantatra bebe kokoa
Amoxil (amoxicillin) $ 23,99 isaky ny takelaka 20, 250 mg Makà tapakila amonoxisilin Antsipiriany Amoxicillin
Augmentin (amoxicillin / clavulanate) 72,99 $ isaky ny takelaka 20, 500-125 mg Makà kupon amxisilinina / clavulanate Antsipiriany amoxicillin / clavulanate
Unasyn (ampicillin / sulbactam) 110,36 $ isaky ny 16, ny vahaolana 3 (2-1) gm dia namboarina indray Makà tapakila ampicillin / sulbactam Antsipiriany ampicillin / sulbactam
Dycill (dicloxacillin) $ 103.99 isaky ny 40, kapsily 500 mg Makà tapakila dicloxacillin Antsipiriany Dicloxacillin
Bactocill (oxacillin) $ 104 isaky ny 10, vahaolana 1 gm no namerina Makà kupon' oxacillin Antsipiriany momba ny oxacillin
Pen VK (penicillin V potassium) 40,67 $ isaky ny takelaka 28, 500 mg Makà tapakila potassium penicillin V Antsipirian'ny potassium Penicillin V
Pfizerpen (potassium penicillin G) 47 $ isaky ny 1, 5000000 vahaolana unit namerina Makà tapakila potassium penicillin G Antsipirian'ny potassium Penicillin G
Ny penicillins hafa dia misy:
Zosyn (piperacillin sy tazobactam)
Timentin (ticarcillin sy clavulanate)
Inona no atao hoe penicillin?
Penicillin dia ao amin'ny vondrona iray antibiotika izay matetika no voatendry hitsaboana aretina mikraoba. Ny penicillins dia ao anatin'ny sokajy antibiotika maro karazana fantatra amin'ny anarana hoe antibiotika beta-lactam . Ireo antibiotika ireo dia misy peratra beta-lactam ao anatin'ny firafitr'izy ireo simika. Ny penicillins dia manana hetsika antimicrobial matanjaka amin'ny karazana bakteria maro karazana. Izy ireo dia azo omena toy ny takelaka am-bava, kapsily am-bava, fampiatoana rano, ary tsindrona intravenous (IV).
Ny penicillin dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fahafahan'ny bakteria hitazona ny rindrin'ny sela. ny rindrin'ny sela bakteria dia rafitra manan-danja vita amin'ny molekiola antsoina hoe peptidoglycan izay manampy ny sela hitazona ny endriny. Raha tsy misy ny rindrin'ny sela, dia tsy afaka miaina ny bakteria, izay mitarika ho amin'ny fipoahana (lysis) sy ny fahafatesan'ny sela. Satria mamono bakteria mivantana, ny penicillins dia heverina ho antibiotika bakteria. Ny penicillins amin'ny ankapobeny dia mandaitra amin'ny bakteria miabo gram, fa ny penicillins kosa dia mety mikendry karazana bakteria hafa.
Ny penicillin dia ampiasaina hitsaboana ireo aretina mikraoba amin'ny sofina, orona ary tenda. Izy io koa dia ampiasaina hitsaboana ny otrikaretina bakteria amin'ny sinus, hoditra, lalan-pisefoana ambany, vavony, tsinay, voa, ary tatavia. Ny penicillin dia tsy tokony hampiasaina afa-tsy amin'ny fitsaboana ny aretina vokatry ny bakteria izay mora mankany amin'ny penicillins.
Ny penicillin dia afaka mitsabo ireto manaraka ireto koa:
Ny penicillin dia mety hahomby amin'ny karazana bakteria maro ao anatin'izany:
Ny penicillins voajanahary dia ahitana antibiotika toy ny penicillin G, ao anatin'izany ny potassium penicillin V. Ireto penicillins ireto dia anisan'ny antibiotika voalohany nampiasaina hitsaboana aretina mikraoba. Miasa izy ireo amin'ny alàlan'ny fanakanana ny synthesis amin'ny rindrin'ny sela hamonoana bakteria, ary izy ireo dia mandaitra indrindra amin'ny bakteria miabo tsara sy bakteria grama ratsy. Ny penicillins voajanahary dia ahitana penicillin G sy penicillin V.
Toy ny penicillins voajanahary, ny aminopenicillins dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny synthesis amin'ny rindrin'ny sela bakteria. Na izany aza, afaka mikendry karazana bakteria misimisy kokoa izy ireo; aminopenicillins dia mahomby amin'ny bakteria miabo tsara, enterococci, ary bacilli tsy misy grama, toa ny H. influenzae sy E. coli. Aminopenicillins amin'ny ankapobeny dia ampiarahina amin'ny inhibitor beta-lactamase toy ny clavulanate na sulbactam mba hahatonga azy ireo hahomby kokoa. Ohatra amin'izany ny ampicillin, amoxicillin, ary hetacillin.
Penicillins (spérpseudomonal) malalaka
Ny penicillins broad-spectrum, na antipseudomonal, dia vondrona antibiotika penicillin izay manana fiasa miady amin'ny bakteria mitovy amin'ny aminopenicillins miampy fiasa fanampiny manohitra ny Pseudomonas sy ireo karazana karazana Enterobacter sy Serratia. Toy ny penicillins hafa, ny penicillins antipseudomonal dia matetika raisina amin'ny inhibitors beta-lactamase. Ny penicillins antipseudomonal dia matetika omena kilasy antibiotika iray hafa antsoina hoe aminoglycosides hitsaboana aretina vokatry ny Pseudomonas aeruginosa. Ny ohatra ny penicillins antipseudomonal dia misy piperacillin, carbenicillin, ticarcillin, ary mezlocillin.
Ny bakteria sasany dia mamokatra beta-lactamase, anzima iray izay mampihena ny antibiotika beta-lactam. Ny inhibitors beta-lactamase dia karazana fanafody miady amin'ny fanoherana ny bakteria amin'ny antibiotika beta-lactam. Matetika izy ireo dia atambatra amin'ny antibiotika penicillin mba hisorohana ny penicillin tsy ho rava, izay manampy amin'ny fampitomboana ny fahombiazany. Ireo mpanohitra beta-lactamase dia tsy manana hetsika bakteria rehefa ampiasaina irery. Ohatra amin'izany ny clavulanate (na asidra clavulanic), sulbactam, ary tazobactam.
Penicillin mahazaka Penicillinase
Ny penicillin resistic penicillins dia vondrona penicillins izay ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny Staphylococcus aureus izay mahazaka penicillinase. Azo ampiasaina ihany koa izy ireo hitsaboana Streptococcus pneumoniae sy vondron'aretina A streptococcal, ary koa karazana aretina staphylococcal mora tohina methicillin. Ireo karazana bakteria mahatohitra dia mamokatra anzima antsoina hoe penicillinase, izay afaka mampihena ny antibiotika penicillin. Ny ohatra ny penicillin-resistic penicillins dia misy oxacillin, dicloxacillin, nafcillin, flucloxacillin, ary cloxacillin.
Iza no afaka mandray penicillin?
Ny penicillin dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny otrikaretina bakteria amin'ny olon-dehibe. Ny dosis dia miovaova arakaraka ny karazana penicillin sy formulation ampiasaina. Amin'ny olon-dehibe, matetika ny refin'ny penikazy dia refesina amin'ny miligrama.
Penicillin dia iray amin'ireo antibiotika voalaza matetika indrindra amin'ny zaza. Ny aretina matetika amin'ny fahazazana izay misy fiatraikany amin'ny sofina, orona ary tenda dia mazàna tsaboina amin'ny antibiotika penicillin. Around 10% ny ankizy dia efa voan'ny alikaola penicillin, na dia tsy manana izany aza ny ankamaroan'ny ankizy izay voamarina tena allergy amin'ny antibiotika. Ohatra, ny voka-dratsin'ny gastrointestinal dia tsy heverina ho tena mahazaka. Amin'ny ankizy, ny fatra penicillin dia matetika refesina amin'ny fampiasana milligrams isaky ny kilao ny lanjan'ny vatana.
Milamina ve ny penicillin?
Ny penicillin dia azo antoka amin'ny ankapobeny amin'ny fitsaboana aretina mifindra rehefa omena fatra mety. Ny dosia penisilinina mety mitarika poizina ny rafi-pitabatabana afovoany , izay afaka miseho ho toy ny fanintona. Ny loza ateraky ny poizina ao amin'ny rafi-pitabatabana afovoany dia mety ho avo kokoa amin'ny olona manana olana amin'ny voa, na voa.
Amin'ny tranga tsy fahita firy, ny penicillin dia mety miteraka fanehoan-kevitra anaphylactic. Ny penicillin dia tokony hialana amin'ny olona manana tantara misy fiatraikany hypersensitivity amin'ny penicillin. Ny soritr'aretin'ny anaaphylaxis dia misy ny maimaika, ny mangidihidy, ny fivontosana ary ny fifohana rivotra. Ny fanehoan-kevitra anafilmika dia mitaky fitsaboana ara-pitsaboana eo noho eo. Ireo izay manana tantaran'ny fihenan'ny alikaola amin'ny penicillin dia tokony hisoroka koa ny fihinanana penicillin derivatives, cephalosporins, carbapenems, ary antibiotika monobactam.
Amin'ny tranga izay tsy mahasolo ny antibiotika karazana penicillin dia afaka mandalo fizahana amin'ny hoditra ny marary mba hanombanana ny fisian'ny fihetsika mahazaka ny penicillin. Raha tsara ny fitsapana ny hoditra, a dingana desensitization dia azo atomboka hitantana miadana ny antibiotika mandra-pizaka sy mahomby.
Mampahatsiahy i Penicillin
Tsy misy tadidy penicillin ankehitriny hatramin'ny febroary 2021.
Ny penicillin dia tsy ampiasaina hitsaboana aretina vokatry ny viriosy na ny holatra. Mba hisorohana ny fanoherana antibiotika, ny penicillin dia tsy tokony hampiasaina afa-tsy amin'ny fitsaboana ireo aretina mikraoba izay mora tohina amin'ny penicillin. Ny penisilinina dia tsy tokony hampiasaina raha tsy amin'ny dokotera manan-kery avy amin'ny dokotera. Ny fatra penicillin dia mety mila manitsy na mihena amin'ny marary manana olana amin'ny voina mahery.
Afaka mandray penicillin ve ianao mandritra ny fitondrana vohoka na fampinonoana?
Ny penicillin dia azo antoka amin'ny ankapobeny ampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka sy mandritra ny fampinonoana. Ny fanadihadiana natao tamin'ny biby dia tsy naneho fa ny penicillins dia mety hitera-doza amin'ny foetus. Penicillin G dia antibiotika mahomby amin'ny fisorohana ny fandefasana sifilis manomboka amin'ny reny ka hatrany am-bohoka. Ny mpitsabo iray dia tokony hanontaniana amin'ny fitsaboana antibiotika mety mandritra ny fitondrana vohoka na fampinonoana.
Voafehy ve ny penicillins?
Tsia, ny penicillin dia tsy fanafody voafehy.
Vokatry ny penicillin mahazatra
Ny voka-dratsin'ny penicillins mahazatra indrindra dia misy:
Tezitra ny vavony
Fefy fotsy na mainty amin'ny lela na amin'ny vava
Ny fanehoan-kevitra amin'ny tranokala toy ny mena, mangidihidy ary ny fivontosana (rehefa omena amin'ny alàlan'ny lalan-drà intravenous ny antibiotika)
Ny voka-dratsin'ny penicillins dia mety misy:
Poizina ny rafi-pitatitra foibe
Ny fivontosana ao amin'ny voa
Ny isan'ny sela fotsy ambany
Clostridioides fivalanana mifandraika amin'ny difficile
Ny isan'ny sela ambany fotsy, na leukopenia, dia fiatraikany ratsy amin'ny nafcillin. Ny fatran'ny penicillin avo be omena amin'ny intravenous dia mety miteraka haavon'ny platelet ambany, izay mety hampitombo ny risika amin'ny fandehanan-dra.
Ny penisilinina dia afaka manova ny fitomboan'ny bakteria mahazatra ao amin'ny tsinay ary miteraka fihenan'ny bakteria antsoina hoe Clostridioides difficile (fantatra taloha hoe Clostridium difficile ). Ity karazan-bakteria ity dia mety hiteraka colitis pseudomembranous, na fivontosan'ny tsinay, ary fivalanana lehibe. Na dia fahita matetika amin'ny antibiotika aza ny fivalanana kely dia tokony hifandray ny mpitsabo raha mivoatra ny fivalanana mahery vaika aorian'ny fampiasana penicillin.
Ny penicillins toa ny ticarcillin sy ny carbenicillin dia mety mila sorohina na arahi-maso amin'ireo marary manana aretim-po na voa. Ireo karazana penicillins ireo dia mety mitombo ny tahan'ny sodium ao amin'ny ra.
Ohatrinona ny vidin'ny penicillin?
Antibiotika maro penicillin no misy amin'ny kinova mahazatra. Ny kinova generika an'ny antibiotika dia mora vidy kokoa noho ny marika na dia mandaitra mitovy aza. Ny antibiotika penicillin koa dia rakotry ny ankamaroan'ny drafitra Medicare sy fiantohana. Ny saran'ny antsinjarany amin'ny potassium penicillin V dia mety manodidina ny 40 $ arakaraka ny fatra voalaza.
Ny marary dia mety afaka mamonjy amin'ny antibiotika penicillin amin'ny alàlan'ny programa fitehirizana isan-karazany avy amin'ireo mpamokatra sy fivarotam-panafody. Karatra fitsitsiana fihenam-bidy misy ihany koa hanampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny antibiotika penicillin.
Tresiba vs. Lantus: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ny torolàlana ho an'ny vatomamy Halloween tsy misy gluten
etodolac 500 mg inona no ampiasaina
azonao atao ve ny mahazo ny serotonin syndrome amin'ny fatra iray
afaka misotro toaka ve ianao raha mandray adderall
mandra-pahoviana ny mpitsentsitra albuterol no mijanona ao amin'ny rafitrao
maimaim-poana ny pilina fanabeazana aizana raha tsy misy fiantohana
inona ny tsimatimanota ilaiko amin'ny oniversite